hoo!haa!! – Page 26 –
Post Views: 142 Aja/okwute/ugwuRead More →
Post Views: 143 ỤTỤTỤ/ABALỊRead More →
Post Views: 106 Ọtụtụ ụmụ Nigeria anọrọla n’ọba ozi ikuku di iche iche kpọkue aka na-achị ala anyị bụ Mohammadu Buhari nakwa osote ya bụ Osinbanjo ka ha gbaa mbọ kwụsị ogbugbu ana-egbu ndi ụka Kraist, ọ kachakwa na steeti Plato. Ha rụtụrụ aka n’ogbugbu aka gburu naari mmadụ abụọRead More →
NNUKWU ỌGBA AGHARA DỊ N’ETITI EBỌNYI NA CROSS RIVER
Post Views: 144 Egbuela ihe ruru mmadụ iri na atọ ma gbakwa ọtụtụ ụlọ ọkụ n’ime obodo Ukele dị n’okpuru ọchịchị Yala nke steeti Cross River nakwa ndi agbatobi ha ndi Izzi nke steeti Ebonyi. Esem okwu ha abụrụla ihe na-emezi kwa afọ. Ajọ ọnọdụ a nke malitere n’afọ pukuRead More →
Post Views: 101 Onye isi oche ọchịchị ime obodo ọdịda anyanwụ Ọka nke steeti Anambara bụ Leo Nwuba, ekwuola na mkpu ndi mmadụ na-eti gbasara mgbanwe agbanwere ogbe ahụ ana-akpọbụ Abakaliki street n’Ọka adịghị ka ha si eche ya. Nwụba sịrị na steeti Anambara adịlarị na mbụ weputa ebe ọzọRead More →
ONYE ‘AMỊ’ AHAPỤLA NDI BOKO HARAM GBAA ONWE YA
Post Views: 95 Ótú onye agha ekwubeghị aha ya, n’ime ndi na-alụso ndi Boko Haram ọgụ na steeti Borno; ka an-ekwu na oji egbe dulaa onwe ya mmụọ. Ọ bụ na usuu ndi agha dị n’Ilọrị nke steeti Kwara ka-esi ziga nwoke a ihu ọgụ nke ndi Boko na steetiRead More →
Ndi DSS awakpoola ụlọ Abaribe maka Nnamdị Kanụ
Post Views: 110 Abụja: Ọ karịwo elekere atọ kemgbe ndi ọrụ nchekwa DSS ji agba kpuru kpuru n’ụlọ Sinetọ Enyinnaya Abaribe na mpaghara Apo n’Abụja. Onye ha na-achọ bụ Mazi Nṅamdi Kanu, onyeisi ndi IPOB. Ka ha nọzị na-eme nkea, Ndigbo bi n’Abụja, ndi ihe nwa amadị a na-amasị nkeRead More →
ENWETARA OGBUNIGWE N’ISI ỤLỌ ỌRỤ PDP N’ABAKALIKI
Post Views: 110 Aka na-achị steeti Ebonyị bụ David Umahi nọrọ na Wenesidee gara aga kwue na ndi uwe ojii nke steeti ahụ achọpụtala ihe na-agbawa n’iké ana-enyo enyo dịka ogbunigwe n’isi ụlọ ọrụ ndi PDP nke dị n’okporo ụzọ awara awara si Abakaliki gawa Enugu. Ọ sịrị na ọbụRead More →
Post Views: 96 Onye ahụ bụburu igwe ndi Agbadala/Aham, (obodo kwụrụ onwe ha) n’Achị dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Oji River nke steeti Enugu, n’ụdị lee ya jidere m, bụ Ichie Uche Onyekwere ekwuputala ebum n’obi ya izọ oche ndi ọdịda anyanwụ Enugu n’ụlọ omebe iwu sineti, ala anyị. UcheRead More →
AKA KPARA NDI AGHA ISIS ABỤỌ N’ABUJA
Post Views: 117 Ndi ọrụ nche obodo nke akpọrọ Department of States Services, DSS, n’aha ichafu nọrọ tata kwue na ha anwụchiela mmadụ abụọ bụ ndi ọlụọ ọlaa amara dịka ISIS na Gwagwalada dị n’Abuja. Mmadụ abụọ ndi a bụ ndi akpọrọ aha ha dịka Bashiru Adams nakwa Rufai Sajo.Read More →
Post Views: 123 N’ isi nso a ka ozi na-aga aka nri nakwa aka ekpe na ewepula Abakaliki dịka aha otu ogbe (Abakaliki Street) na Ọka bụ isi obodo steeti Anambara. Akụkọ na-ekwu na ihe butere nke a bụ na ogbe ahụ emepola na ụdị ịkpọ ya ‘Abakaliki Street’ ga-abụRead More →
Post Views: 188 IWE/NDIDI/NWAYỌRead More →
NDI ỌKADA ỌNICHA GA-ALARỊRỊ – Obianọ
Post Views: 101 Aka na-achị steeti Anambara bụ Willie Obianọ ekwuela na ọ bụ iwu na-aga-amachị iji ọgba tim tim ejiri ọkada mara, ibu ndi njem n’Onicha malite n’abali mbụ nke ọnwa asaa n’afọa. Obianọ kwuru hoohaa, na etiela iwua bụ na etiela ya. Onweghị ịla azụ n’ime ya. ỌbụRead More →
ONYE ISI NDI UWE OJII ETOOLA NDI EGWU BỌLỤ CRIME BURSTERS KA HA SIRI MERIE NDI EGWU BỌLỤ ENUGU RANGERS
Post Views: 95 Onye isi ndi uwe ojii na steeti Enugu bụ Mohammed Danmallam etoola ndi egwu bọlụ ndi uwe ojii na steeti ahụ bụ Crime Bursters Football Club ka ha siri merie ndi egwu bọlụ Enugu Rangers Internatiinal Football Club na isi nsoa. Mmeria ndi egwu bọlụ nke ndiRead More →
STEETI ENUGU KACHAA NWEE UDO NA NAIJIRIYA – Onye isi ndi uwe ojii
Post Views: 112 N’izu ụka ole na ole gara aga, ka onye isi ndi uwe ojii na steeti Enugu bụ Alhaji Mohammed Danmallam bịara mepee ogige ụlọ ọrụ ndi uwe ojii, (Divisional Headquarters) na Nenwe dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Anịnri na Steeti Enugu. Ọ bụ òtù ihụnanya, mmepe obodoRead More →
Post Views: 94 Hmm! A na-ekwu na oke tagburu mmadụ, ngwere chịrị mma gawa ịpị eze. Ka EFCC hụchara na ụlọikpe atụọla madụ abụọ bụbụ Gọvanọ nga,ha eforola ntụtụ taa ma na akwadosi ike ịhụ na Dọkịnta Ọjị Ụzọ Kalụ nke chịburu Abịa Steeti ga ejekwu nga. Ndia bụbuRead More →
Ilu maka di/nwunye
Post Views: 263 Ilu taa ga abụ maka di/nwunyeRead More →
ILU TAA BỤ MAKA AZỤ(BACK) NA AZỤ(FISH)
In: Ama Ntorọbịa, Ilu
Post Views: 191 ILU TAA BỤ MAKA AZỤ(BACK) NA AZỤ(FISH)Read More →
Post Views: 113 Taa bụ EKE; Eke Ọnwụnwa Owere, Eke Obinagụ Emene-Enugu, Eke Ụbụlụ uku,Eke Anị, Ngwo, wdg. Kedu ndi ga aga ahịa taa? Uru dịkwa ya, ma ndi nwoke, ma ndi nwanyịRead More →
Post Views: 204 NKWỌ. Igbo ndi ọma, unu abọọla chi. Taa bụ Nkwọ; Nkwọ Nnewi, Nkwọ Mbanabọ Awgu, Otu Nkwọ Ọnịcha, wdg. Onye ga-aga ahịa taa? Uru dịkwa ya, onye zụkarịa o nweta ihe nrite gbara agbaRead More →